Naya Drishti | बिलगट्सले किन गरे, पत्नी सँग सम्बन्धविच्छेद ? - Naya Drishti बिलगट्सले किन गरे, पत्नी सँग सम्बन्धविच्छेद ? - Naya Drishti
सन् १९७० को दशकमा स्थापना भएको माइक्रोसफ्टका सह–संस्थापक गेट्सले त्यसयता कम्पनीलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी बनाए । त्यही माध्यमबाट धेरै पैसा कमाए । नेपाल प्रेस बाट ।